Shirki wadatashiga Madaxda Soomaaliya oo Saaka laso Gaba-gabayn doono – Radio Daljir
Shirki wadatashiga Madaxda Soomaaliya oo Saaka laso Gaba-gabayn doono
Maajo 2, 2015 1:32 b 0
Sabti, May 02, 2015 (Daljir) — Goor dhow oo saaka ah waxa lagu wada in lagu dhawaaqo natiijadi kaso baxday shirkii wadatashiga dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah kaasi oo maal-mihi laso dhaafay ka socday magalada Garoowe ee caasimada Puntland.
Egooyinki shirka uga qayb-gelayey dhinacyada wada xaajoodku u socday aya haatan ku sugan xarunta Madaxtooyada Puntland ee Garoowe,waxana lagu wada inay si rasmi ah u shaaciyaan waxyaabihi lagu heshiiyey ee shirka kaso baxay mudadi uu socday,iyo waliba waxyaabihii ayka wada hadleen.
Dhamaan hogaamiyayaasha Soomaalida aya maalinti sadexaad ku sugan magalada Garoowe,iyagoona ka dhursugayey waxyaabaha ay isku Afgartaan gudiyo dhinacyada kala matalayey oo iyagu ka wada hadlayey Ajandayaasha la go,aamiyey in laga xaajoodo.
Qodobada shirka looga hadlayey aya lagu sheegay qorshaha dhismaha maamulka loo dhisayo gobollada dhexe oo ay isku hayaan dowladda Federaalka Soomaaliya iyod dowladda Puntland oo iaygu ku muransan xuduuda uu yeelanayo maamulkaasi,dhismaha ciidamo qaran oo isku dhaf ah,2016-ka iyo sidi dalka doorashooyin dadweyne oo qof iyo cod ahi uga dhici lahayen ka dhabaynta nidaamka Federaalka Soomaaliya qaadadtay,iyo sidi loo qaybsan lahaa deeqaha caalamka.
Maalinti kowaad ee shirka la guda galay aya lagu kala kacay kadib markii la isku afgaran waayey qodob ah dhismaha maamulka gobollada dhexe ee dalka kaasi oo Puntland soo jeedisay,in dowladda Federaalku cadayso mowqafkeeda Siyaasadeed ee dhismaha maamulkaasi,halka gudiga matalayey dhinaca dowladda Federaalku ay soo jeediyeen in marka la dhiso maamulkaasi la xadayn doono xuduudiisa sidaasna looga gudbo.
Waxaa laga dhursugaya Natiijada heshiis ee kaso bixi doonta wajiga labaad ee shirka wadatashiga dowladda Federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee Puntland marti-gelisay.
BARNAAMIJKII SAAKA IYO DUNIDA SABTI,02__[DHEGEYSO]
Isimada Puntland oo Qada Sharaf u sameeyay Madaxweyne Xasan iyo Madaxda Maamulada Soomaliya